स्त’न झोल्लिएको छ ? यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार – Jagaran Nepal
स्त’न झोल्लिएको छ ? यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार
पुष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश अनि कसिलो मांसपेसी भएकी महिलालाई आकर्षक मानिन्छ। त्यस्तै विकसित स्त’न पनि महिलाको शारीरिक आकर्षणको मापदण्डमा पर्छ। विकसित स्त’नले भावी सन्तानको पोषणको सुनिश्चिततालाई संकेत गर्छ।
त्यसैले जैविक रूपमा पुरुषहरू थाहा पाएर वा नपाई विकसित अर्थात् ठूला स्तनप्रति र त्यस्तो स्त’न भएकी महिलाप्रति आकषिर्त हुन्छन् जसले गर्दा उक्त महिलाबाट जन्मने आफ्ना सन्तान बाँच्ने सम्भावना बढी होस्।
अचेल शरीरचाहिँ अति पातलो तर स्त’नचाहिँ ठूलो हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। छापा, चलचित्र वा टेलिभिजनमा देखिएका कतिपय कुराको सत्यता विचार नगरी त्यसकै पछाडि लाग्नु हुँदैन। भाग्यवश स्तन खुला राख्नु नपर्ने अ’ङ्ग भएकाले यसको उभारलाई श’ल्यक्रिया नै नगरी बढी भएजस्तो देखाउन सकिन्छ।
महिला अथवा युवतीको सौ’न्दर्य नै स्त’न हो । समय नपुग्दै अथवा जवान हुँदै स्त’न झो’ल्लि’एमा युवतीको सौन्दर्य नै बि’ग्रन सक्दछ । अनि युवतीहरुलाई पनि आफ्नो स्त’नको बारेमा चिन्ता पर्न थाल्छ ।
कपडा लगाउँदा पनि ठीक ठाउँमा स्त’न नदेखिर झो’ल्लरी परिरहन्छन् । स्त’न झो’ल्लि’एमा अवश्य नै युवतीको सौन्दर्य बिग्रन्छ । त्यसैले सजिलो उपायसँग औ’ष’धि उपचार गर्दा राम्रो बन्न सक्दछ ।
१. आधा तोला कमल गट्टाको धुलोलाई मिश्रीसँग मिसाएर दुधसँग १ महिनासम्म से’व’न गर्नाले स्त्रीको झो’लि’एको स्त’न साह्रो बन्दछ ।
२. बरको हाँगाको जराको कलिलो रातो टु’प्पा पिँ’धेर पानीमा मिलाई स्त’नमा लगाउनाले पनि स्त्रीको स्त’न साह्रो हुन सक्दछ ।
त्यस्तै आफ्नो थुनचोली (ब्रा) भित्र कपडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्नु नै सबैभन्दा सजिलो तथा सस्तो उपाय हो। त्यसबाहेक अलिक बढी खर्च गरेर यस्तै वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्त’नलाई माथितिर उचाल्न प्रयोग गरिने साधनले स्त’नको वास्तविक साइजमा परिवर्तन नगरे पनि देख्दा स्त’न ठूलो भएको भान पर्छ र सुन्दरतामा वृद्धि हुन्छ।
स्त’नमा लगाउने क्रिम अनि पम्पले स्त’नको आकार बढाउने दाबी गरिएको छ, तर यसले स्त’नको आकार तथा नापमा पार्ने स्थायी प्रभावका सम्बन्धमा अझै केही वि’वाद छ। शल्यक्रिया गरेर स्त’नको आकार बढाउनु एउटा अर्को उपाय हो, तर शल्यक्रिया गर्नुभन्दा पहिले धेरै कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो विधि खर्चिलो मात्र होइन, यसका नकारात्मक प्रभाव पनि हुन सक्छ।